प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा के छ ? हेर्नुहोस् पूर्णपाठ Canada Nepal
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा के छ ? हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय मंगलबार अदालतले बदर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि योगेश भट्टराईले भने - जनताको जित, लोकतन्त्रको जित
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यस विरुद्ध अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । सोही रिटको सुनुवाईमा आज अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
फाल्गुण ११, २०७७ मंगलवार १८:५६:२९ बजे : प्रकाशित